ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा नेपालसँग गोप्य बयान लिएकै हो त ? « रिपोर्टर्स नेपाल
ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा नेपालसँग गोप्य बयान लिएकै हो त ?
प्रकाशित मिति : ६ पुष २०७६, आईतबार
काठमाडौं ६ पुस । ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल तानिएका छन् । अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग गोप्य रुपमा बयान लिएको छ । नेपालसँग सीआईबीले सोधपुछ गरेको छ । नेपालसँग लिखित र मौखिक प्रतिक्रिया लिएको छ ।
नेता नेपालले भने आफुले बयान नदिएको बताएका छन् । रिपोटर्स नेपाल डटकमसँग कुराकानी गर्दै उनले आफुले सीआईबीलाई बयान नदिएको बताए । ‘मैले बयान सयान केही दिएको छैन’ नेपालले भने, ‘तर जग्गा प्रकरणमा केही अधिकारीसँग कुराकानी भएको हो ।’
अख्तियारको टोलीले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग २०६६ चैत र २०६७ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबारे अत्यन्त गोप्य रूपमा जानकारी लिएको हो । केही कागजातमा ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा भन्ने लेखेर प्रस्ताव नै लगेको देखिएकाले मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग सोधपुछ गरिएको हो ।
आज २१३ कोरोना संक्रमित थपिए
काठमाडौं, १५ माघ । नेपालमा कोरोना भाइरसका आज २ सय १३ जना संक्रमित थपिएका छन्
सारा हुसेन १५ माघ : समुद्रमा अत्यधिक माछा मार्ने गरिएपछि शार्कका कतिपय प्रजातिको संख्या पछिल्लो
काठमाडौं, १५ माघ । अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति फेरिएसँगै ‘आन्तरिक आतंकवाद’ त्रास बढेको खबर सार्वजनिक भएको
एनसीसी बैंकद्वारा ६१ करोड नाफा
काठमाडौं, १५ माघ । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंक लिमिटेडले दोस्रो त्रैमाससम्ममा ६१ करोड